श्रीलंकामा दुर्इ प्रधानमन्त्री ! मन्त्रीलार्इ अपहरण गर्न खोज्दा गोली चल्यो – Daunne News
श्रीलंकामा दुर्इ प्रधानमन्त्री ! मन्त्रीलार्इ अपहरण गर्न खोज्दा गोली चल्यो
Daunne News	 प्रकाशित : कार्तिक ११, २२:५४
कोलोम्बो : श्रीलंकामा गहिरिँदो राजनीतिक संकटबीच राजधानी कोलम्बोमा गोली चलेको छ । समाचार अनुसार राष्ट्रपति सिरिसेनाका समर्थकले बर्खास्त सरकारका पेट्रोलियम मन्त्री अर्जुन रणतुङ्गालार्इ अपहरण प्रयास गरेका हुन् । त्यसपछि रणतुङ्गाका सुरक्षागार्डले गोली चलाउँदा कम्तिमा ३ जना घाइते भएका छन् ।
समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार गोली चलाउने गार्डलार्इ गिरफ्तार गरिएको छ। रिपोर्ट अनुसार जब अर्जुन रणतुङ्गा आफ्नो सरकारी कार्यालयबाट सिलोन पेट्रोलियम कर्पोरेशनमा गइरहेका थिए त्यही बेला हंगामा भयो । त्यसैक्रममा उनका गार्डले गोली चलाएका हुन् ।
पुलिस प्रवक्ता रुवान गुनसेकराका अनुसार सिलोन पेट्रोलियम कर्पोरेशन बाहिर पुलिस तैनाथ गरिएको छ। अहिले पनि त्यहाँको अवस्था तनावग्रस्त छ ।
यसैबीच श्रीलंकाको संसदका सभामुख कारु जयसूर्याले संकटमा फसेको रानिल विक्रमसिंघेलार्इ राहत दिँदै आइतवार उनलार्इ देशको प्रधानमन्त्रीकारूपमा मान्यता दिएका छन् । युएनपी नेता विक्रमसिंघेलार्इ राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेनाले शुक्रवार प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेका थिए ।
समाचार एजेन्सी भाषाका अनुसार सिरीसेनालार्इ लेखेको एक पत्रमा जयसूर्याले १६ नोभेम्बरसम्म सदन निलम्बित गर्ने उनको निर्णयमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनले पत्रमा गम्भीर एवम् अवान्छनीय परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिँदै राष्ट्रपतिलार्इ विक्रमसिंघेलार्इ सरकारका नेताका रूपमा मिलेको विशेषाधिकार फेरि बहाली गर्ने भनेका हुन् ।
यता अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वाचले आइतवार महिन्दा राजपक्षेलार्इ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको निर्णयले देशलार्इ एक पटक फेरि गलत बाटोमा लगेको टिप्पणी गरेको छ।
महिलाले १० लाखको हिरा फेला पारेपछि…
श्रीलङ्कामा औषधिको चरम संकट, बिरामीलाई नै मृत्युदण्ड दिन थालियो !
महिलालाई मा`रेको अ`भियोगमा भेडालाई तीन वर्ष जेल !
अमेरिका: विद्यालयमा गाेली चल्दा कम्तीमा १८ बालबालिका एक शिक्षकको मृ–त्यु